Ny praiminisitra italiana dia manolotra fameperana vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany Italia » Ny praiminisitra italiana dia manolotra fameperana vaovao
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Vaovao farany Italia • Vaovao • fanorenana • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Ny praiminisitra Italiana Conte
Rehefa avy nandreraka ny resadresaka nifanaovana tamin'ny filoham-paritra italiana sy ny antoko politika isan-karazany mba hahazoana marimaritra iraisana hampiharana fepetra henjana mandritra ny vanim-potoana izay misy ny fiantsenana, krismasy ary fankalazana ny faran'ny taona, Ny praiminisitra italiana Giuseppe Conte nampita ny fanapahan-kevitra farany tamin'ny italiana.
"izany manery antsika hampiditra fepetra izay manome fameperana fanampiny manomboka amin'ny 21 Desambra ka hatramin'ny 6 Janoary. ” Ireo ny tenin'ny PM Conte tamin'ny valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety mba hanehoana ny fepetra noraisin'ny didim-panjakana sy ny vaovao DPCM (Decreto del filoha del consiglio - Didim-panjakana nataon'ny praiminisitra).
"Ny isan'ny valan'aretina amin'ny 2 Desambra dia 23,501. Mbola lavitra ny lalana mankany amin'ny faran'ny areti-mandringana; tsy maintsy esorintsika ny mety hisian'ny onja fahatelo izay mety ho tonga hatramin'ny volana Janoary, ary mety ho mahery setra noho ny onja voalohany sy faharoa, "hoy ny PM, ary nanampy hoe," Hotazominay ny rafitra mena, volomboasary ary faritra mavo. Manaporofo izany fa mahomby; mamela antsika handrefy ny fitsabahana izany ary handray fepetra miavaka tsara amin'ny faritany.
“Ny fepetra dia sahaza amin'ny loza mety hitranga amin'ny faritany raha tsy misy sazy tsy ilaina. Tao anatin'ny iray volana, ny fihodinan'ny areti-mifindra, ny index Rt tamin'ny 0.91, dia latsaka ambany 1. Tao anatin'izay andro vitsivitsy izay dia nanoratra ny fihenan'ny fampidirana hopitaly izahay na dia eo am-pitsaboana mafy aza, ary antenainay fa manakaiky ny fetin'ny Krismasy dia ho mavo ny faritra rehetra. Manalavitra ny fanidiana fanasaziana toy ny amin'ny lohataona izahay. ”
Na izany aza, misy lafiny iray izay tsy mamela ny fanelingelenana. Hiatrika ny fialantsasatry ny Noely miaraka amin'ny refy amin'ireo faritra mavo i Italia; hialana amin'ny fiakarana amin'ny fiolahana areti-mifindra izany. Izany no antony nanerena ny firenena hametraka fepetra izay misy fameperana fanampiny manomboka amin'ny 21 Desambra ka hatramin'ny 6 Janoary.
“Andao hanombohana amin'ny dia: ny 21 Desambra ka hatramin'ny 6 Janoary dia voarara ny fivezivezena rehetra (ao Italia) avy amin'ny faritra iray ka hatrany amin'ny faritra hafa, na dia ny tonga any amin'ny trano faharoa. Amin'ny 25 sy 26 Desambra sy 1 Janoary, voarara ihany koa ny fivezivezena amin'ny tanàna iray mankany amin'ny iray hafa. Ny fandraràna ny fivezivezena manerana ny faritany dia mijanona manomboka amin'ny 10 ora alina ka hatramin'ny 5 maraina; amin'ny Alin'ny Taom-baovao dia hitarina amin'ny 10 alina ka hatramin'ny 7 maraina.
“Afaka mandeha ianao noho ny asa, ny fahasalamana ary ny antony ilaina. Anisan'izany ny fanampiana ireo olona tsy miankina amin'ny tena. Avela hiverina any amin'ny tanàna misy anao ianao, any an-tranonao ary amin'ny toerana onenanao maharitra na maharitra. Io dia hahafahan'ny fihaonana amin'ny olona indray noho ny antony miasa nefa miara-miaina matetika sy / na tsindraindray ao an-trano iray.
“Ny italiana izay handeha hizaha tany ivelany amin'ny 21 desambra hatramin'ny 6 janoary dia tsy maintsy miatrika karantina rehefa miverina. Ireo mpizahatany vahiny tonga atsy Italia miaraka amin'izay dia tsy maintsy iharan'ny quarantine. ”
Mihidy hatrany ireo toeram-pialan-tsasatra hatramin'ny 6 Janoary ary mety hisokatra amin'ny 7 Janoary. Misy adidy amin'ny quarantine ho an'ireo miverina avy any amin'ny faritra ski avy any ivelany mba tsy hiverenan'ity areti-mifindra ity.
“Manomboka amin'ny 7 Janoary, hiverina ny hetsika any amin'ny sekoly ambaratonga faharoa; Amin'ity dingana ity isaky ny sekoly dia azo antoka ny fiverenan'ny mpianatra 75%. ”
“Mihantona ny sambo fitsangantsanganana manomboka amin'ny 21 Desambra ka hatramin'ny 6 Janoary.” Manomboka amin'ny 21 Desambra 2020 ka hatramin'ny 6 Janoary 2021, ny serivisy fitsangantsanganana ataon'ny sambo mpandeha ny sainam-pirenena Italiana dia mihantona amin'ireo seranana Italiana ho toerana fiaingana, fijanonana, na toeran-kaleha farany. Voarara ihany koa ny 20 Desambra 2020 ary hatramin'ny 6 Janoary 2021 ny hidiran'ny orinasam-pitantanana, ny tompona sambo, ary ny kapitenin'ny sambo mpandeha misy sisin-tany hiditra ao amin'ny seranan-tsambo italianina, ao anatin'izany ny fijanonan'ny fiara tsy miasa. ” Ny fijanonana amin'ny fitsangantsanganana an-dranomasina dia ny fisorohana ny zavatra voarara an-tanety ka mety hitranga any an-dranomasina koa izany.
“Amin'ny faritra mavo, hisokatra hisakafoanana an-tsokosoko hatrany ireo bara, trano fisakafoanana ary pizza, na dia amin'ny 25 Desambra aza. Any amin'ny faritra volomboasary sy mena dia hisokatra izy ireo manomboka amin'ny 5 ka hatramin'ny 22 hariva raha tsy ho entina mivoaka sy halefa any an-trano. ” Mikasika ny fankalazana, ny fiaraha-misakafo, baolina lehibe, izay tena tian'ny Italiana, dia natolotra ny tolo-kevitra matanjaka: "Aza mandray tsy fiaraha-monina, indrindra amin'ireo fotoana ireo, rehefa mihamafy ny fankalazana.
“Misokatra hatrany ireo trano fandraisam-bahiny manerana an'i Italia fa amin'ny 31st, tsy azo alamina ny fety hariva sy ny sakafo hariva; hikatona amin'ny 6 hariva ny trano fisakafoanana amin'ny hotely. Aorian'io fotoana io dia serivisy efitrano ihany no avela. ” Ireo fivarotana “manomboka amin'ny 4 Desambra ka hatramin'ny 6 Janoary dia hisokatra hatramin'ny 9 alina. Manomboka amin'ny 4 Desambra ka hatramin'ny 15 Janoary amin'ny andro fialantsasatra sy ny andro alohan'ny fialantsasatra dia ny fivarotam-panafody, parmasia, tobim-pahasalamana, tobacconist, agents vaovao ary garderie ihany no hisokatra ”, hoy ny famaranana nataon'ny PM Conte.